I-Fibromyalgia: Ngaba yintoni ukutya okufanelekileyo kunye nokutya kulabo abaneFibromyalgia?
25 / 07 / 2018 /4 Amazwana/i Intlungu engapheliyo, Amanqaku mfanelo/av ubuhlungu
I-Fibromyalgia: Yintoni ukutya okufanelekileyo? | Iingcebiso malunga nokutya okusekwe kubungqina kunye nokutya kwabo bane-fibromyalgia
Ngaba unesifo se-fibromyalgia kwaye uyazibuza ukuba kukuphi ukutya okufanelekileyo kuwe? Izifundo zophando zibonise ukuba abantu abaninzi abane-fibromyalgia banokuba nefuthe elihle lokutya ukutya okufanelekileyo kunye nokulandela ezi ngcebiso zokutya sizivezayo apha-ke siyathemba ukuba nawe uza kuba nesiphumo esihle "sokutya kwe-fibromyalgia" esibhala ngayo kweli nqaku ngokusekwe kuphononongo olukhulu lwesishwankathelo. Inqaku liza kugubungela ukutya okunesondlo kunye nokutya malunga nokuba luhlobo luni lokutya ekufuneka ulutyile kwaye luhlobo luni lokutya ekufuneka uluphephe- rhoqo ngokunxulumene nokuchasana ngokuchaseneyo nokuchasana nokudumba.
[tyhala h = »30 ″]
Ingxelo yoPhando: Eyona yona Dibibho yeFibromyalgia
Njengoko kwaziwa udinwe isifo esinganyangekiyo sokuqaqanjelwa sisifo esidala iintlungu kunye nezihlunu - kunye nokungalali kakuhle kunye nokusebenza kwengqondo (umzekelo, inkumbulo kunye ifibrotåke). Ngelishwa, akukho lunyango, kodwa ngokusebenzisa uphando unokuba nobulumko malunga nento enokuphelisa uxilongo kunye neempawu zayo. Ukutya kudlala indima ebalulekileyo ekuthinteleni ukushukuma komzimba kunye nokunciphisa uvakalelo lwentlungu kwimisonto ebuhlungu yemisipha. Eli nqaku lisekwe kuphononongo olukhulu olwenziwe nguHolton okqhubekayo kubandakanya izifundo zophando ezingama-29.
Abantu abaninzi abane-fibromyalgia bayazi ukuba kubaluleke kangakanani ukumamela umzimba ukuthintela iincopho zentlungu kunye ne "flare ups" (iziqendu ezineempawu ezibonakalayo). Ke ngoko, abantu abaninzi banenkxalabo enkulu malunga nokutya kwabo, ngenxa yokuba bayazi ukuba ukutya okufanelekileyo kunokunciphisa iintlungu kwi-fibromyalgia - kodwa bayazi nokuba uhlobo lokutya olungalunganga lunokukhokelela ekonyukeni kwentlungu kunye neempawu ze-fibromyalgia. Ngamafutshane, ufuna ukunqanda ukutya okuchasayo (okuchasayo) kwaye endaweni yoko zama ukutya ukutya okuchaseneyo (ukudumba). Uphononongo lwesishwankathelo (uhlalutyo lweemeta) olupapashwe kwincwadi yophando eyaziwayo Ulawulo lwezinhlungu Ugqibe kwelokuba ukusilela kwinani lezakhamzimba kunokukhokelela kwimpawu eziphezulu kwaye ukutya ngendlela efanelekileyo kunokunceda ukunciphisa zombini iintlungu kunye neempawu. Jonga ikhonkco lofundo ezantsi kwenqaku. (1)
Yikholwe okanye ungakholelwa: Kwiintsuku zakudala bekucingelwa ukuba i-fibromyalgia sisifo sengqondo
Kwiminyaka emininzi edlulileyo, ogqirha babekholelwa ukuba i-fibromyalgia yayisisifo sengqondo. Kwakungekho kude kube ngu-1981 apho isifundo sokuqala saqinisekisa iimpawu ze-fibromyalgia kwaye ngo-1991 ikholeji yaseMelika iRheumatology yabhala izikhokelo ukunceda ekuchongeni isifo se-fibromyalgia. Uphando kunye nezifundo zeklinikhi zihlala zisenza inkqubela kwaye ngoku sinokunyanga ngokuyinxenye i-fibromyalgia, ngokudibeneyo kunye nezinye iindlela zonyango, ngokusebenzisa oko sikubiza ngokuba kukutya kwe-fibromyalgia.
Ngoku siza kujonga ngakumbi ukuba abo bane-fibromyalgia kufuneka babandakanye ntoni ekutyeni kwabo-kwaye luhlobo luni lokutya ekufuneka behleli kude-ngokusekwe kuphando olukhulu olwenziwe nguHolton et al (2016). Siqala ngokutya ekufanele umntu akutye.
Ukutya omele kukutya ukuba une-fibromyalgia
Iziqhamo kunye nemifuno (kubandakanywa iinyawo ezisezantsi kunye nonyawo oluphezulu)
Iimeko ezinje ngokuncanca kwamathumbu, ukutyeba kakhulu kwaye kuxilonge i-autoimmune zixhaphakile phakathi kwabo bafunyaniswa ukuba une-fibromyalgia.
Abanye babaphandi ababalaseleyo ebaleni bayavuma ukuba ukutya okuneekhalori ezisezantsi kunye nomxholo wefayibha oqulathe amanqanaba aphezulu ee-antioxidants kunye nee-phytochemicals (izityalo ezinempilo zezityalo). Sifumana inani elibalulekileyo loku kwimifuno nakwiziqhamo- yiyo loo nto kucetyiswa ukuba ukutya kwendalo kufanele ukuba kube yinxalenye yokutya kwabo bane-fibromyalgia. Abo banolwazelelelo ngakumbi kufuneka bazame indlela esezantsi ye-fodmap yokulawula ngaphandle nayiphi na imifuno kunye neziqhamo abangazinyamezeliyo.
Imizekelo yemifuno elungileyo kwabo bane-fibromyalgia esezantsi:
Yonke imifuno kwifolda yonyawo olusezantsi ithathwa ikhuseleke kakhulu kwaye ilungile kwezo fypromyalgia kunye ne-IBS.
Imizekelo yemifuno enokuba ilungile ngefibromyalgia (ifolda yonyawo oluphezulu):
nga riki ta
Le yimizekelo yemifuno ekwi-fodmap ephezulu. Oku kuthetha ukuba banokunika ukutya okunesondlo okuninzi kuwe nge-fibromyalgia, kodwa ungasabela nakwezinye iintlobo zemifuno. Sicebisa ukuba usete isicwangciso kwaye uzivavanye- nganye nganye.
Imizekelo yeziqhamo ezinesondlo kwabo bane-fibromyalgia esezantsi:
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba abo bane-fibromyalgia babonakala ngathi banokunyamezeleka okungcono kweebhanana ezivuthiweyo xa kuthelekiswa neebhanana eziluhlaza ngakumbi.
Imizekelo yeziqhamo ezinesondlo kwabo bane-fibromyalgia (ifolda yonyawo oluphezulu):
Iziqhamo ezomileyo (ezinjengezomdiliya)
Ukuba kukho izinto ezikuluhlu lwe-FODMAP osabela kuzo kwaye eziba mandundu iimpawu zakho- ke uyazi ukuba ungahlali kude nantoni.
Imizekelo yamajikijolo atyebileyo e-antioxidant kulawo ane-fibromyalgia:
Ukutya okutyebileyo kwi-omega-3
I-Omega-3 yi-acid enamafutha. Esi sisondlo esifunwa ngumzimba wakho, phakathi kwezinye izinto, ukulwa nosulelo, kodwa olungenako ukuzenzela ngokwalo. Ke, kuya kufuneka ufumane i-omega-3 ngokutya okutyayo.
Iintlanzi zamanzi abandayo, ialnuts, imbewu yeflakisi kunye nethofu zithathwa njengeyona mithombo omega-3. IMackerel inomxholo ophezulu we omega-3, ngoko ke ukutya ngokomzekelo i-mackerel yesonka esidityanisiweyo kunokuba licebo elihle lokuhlangabezana nale mfuno. I-Salmon, i-trout, i-herring kunye ne-sardine yenye imithombo elungileyo kakhulu ye-omega-3.
Imizekelo yokutya okuphezulu kwi-omega-3 kwabo bane-fibromyalgia:
intlanzi enkulu yolwandle
Umxholo ophezulu weeprotein eziqholiweyo
Ukukhathala, amanqanaba ancitshisiweyo kunye nokudinwa ziimpawu eziqhelekileyo phakathi kwabo bachatshazelwe yi-fibromyalgia. Ke ngoko, kubaluleke kakhulu ukunciphisa umda wokutya i-carbohydrate kwaye unyuse inani leprotheni ekudleni.
Isizathu sokuba ufune ukutya ngokutya okunomxholo ophezulu weprotein ebusayo ukuba une-fibromyalgia kungenxa yokuba inceda umzimba kulawule iswekile yegazi kwaye ihlale izinzile imini yonke. Njengoko kusaziwa, iswekile yegazi engalinganiyo inokukhokelela ekutyhafeni okungakumbi kunye nomnqweno onamandla wokutya okuneeswekile.
Imizekelo yokutya okuphezulu kwiprotheyini etyebileyo kwabo bane-fibromyalgia:
Itshizi yasekhitshini (nangona yenziwe kubisi olutywetyiweyo, ngoko ke ukuba usabela kwiimveliso zobisi kuya kufuneka ucoceke)
I yoghur yamaGrike
Ubisi lwe-soy ephantsi
Abanye bancomela ukutya okuncinci ngokusekwe koko sikufundileyo ukuza kuthi ga ngoku
Ngokusekwe kulwazi esilufundileyo ukuza kuthi ga ngoku, sineengcebiso ngokutya okuncinci onokuzama ukungena phakathi kwemini.
Njengoko sele kukhankanyiwe, iiavokhado ziqukethe amafutha asempilweni anika amandla afanelekileyo kwabo bachaphazeleka yi-fibromyalgia. Ziqulathe ivithamin E enokunceda ekulweni iintlungu zemisipha, kunye neevithamini B, C kunye no-K-kunye ne-iron kunye ne-manganese ebalulekileyo. Ke ngoko, sicebisa ukuba uzame i-smoothie equlathe i-avocado ngokudibanisa namajikijolo agcwele i-antioxidants.
I-Salmon ene-walnuts kunye ne-broccoli
Intlanzi kwisidlo sangokuhlwa. Sincoma ngamandla ukuba utye iintlanzi ezinamafutha, ngokukhethekileyo isalmon, amaxesha ama-3 ngeveki ukuba unengxaki ye-fibromyalgia. Siyakholelwa ukuba kuya kufuneka uzama ukuyidla ukuya kumaxesha angama-4-5 ngeveki ukuba ngaba unayo le nto yokugula. I-Salmon iqulethe amanqanaba aphezulu e-omega-3 athintela ukuvuvukala, kunye neprotheni ebomvu enika uhlobo olululo lwamandla. Yidibanise kunye ne-broccoli epakishwe nge-antioxidants kunye ne-walnuts ngaphezulu. Zombini ziphilile kwaye zilungile kakhulu.
Ijusi yelayisi kunye nembewu ye-chia
Enye ingcebiso elungileyo kukutya kwe-fibromyalgia. Ngokufanelekileyo, ijusi yelamuni ineevithamini kunye neeminerals ezinokuthi zisebenze njenge-anti-immune kwaye ke ukunciphisa-buhlungu. Imbewu yeChia iqulethe amanqanaba aphezulu eprotein, i-fiber, i-omega-3s kunye neeminerals, okwenza enye yezona ndlela zintle zokufumana isondlo.
Ukutya okufuneka kuthintelwe ukuba unayo i-fibromyalgia
Iswekile kukudumba okuvuthayo- oko kuthetha ukuba kuyayinyusa kwaye kudala ukusabela okuvuthayo. Ke, ukuba nokutya iswekile eninzi ayisiyiyo eyona nto ikrelekrele ukuyenza xa une-fibromyalgia. Ukongeza, imeko yeswekile ephezulu ihlala ikhokelela ekuzuzeni ubunzima, ekunokuthi emva koko kubeke uxinzelelo kumalungu kunye nezihlunu zomzimba. Nayi eminye imizekelo yokutya neziselo ezinomxholo ophakamileyo weswekile:
Ikhekhe, iicookies kunye neekuki
Iibheli kunye ne-churros
Abantu abaninzi abane-fibromyalgia baxela ukuba mandundu kweempawu xa besela utywala. Kukwimeko yokuba inani lamachiza athomalalisa ukudumba kunye neepilisi zokuthomalalisa iintlungu azisabeli kakuhle ngotywala- kwaye ke umntu unokuba neziphumo ebezingalindelekanga okanye anciphise ukusebenza. Utywala buqulathe inqanaba eliphezulu leekhalori kwaye zihlala zineswekile- oko ke kunceda ukunika iimpendulo ezitshisayo kunye nobuntununtunu emzimbeni.
Ukutya okuphezulu kwi-carbohydrate
Iicookies, ikuki, irayisi emhlophe kunye nesonka esimhlophe kunokubangela amanqanaba eswekile yegazi kwi-Skyrocket kunye nomsindo. Amanqanaba angalinganiyo anokukhokelela ekukhathalekeni kunye nokunyuka amanqanaba eentlungu kwabo bane-fibromyalgia. Ixesha elingaphezulu, ukungalingani okunjalo kunokubangela umonakalo kwii-insulin receptors kunye nobunzima bomzimba ukulawula iswekile yegazi kwaye ke amanqanaba amandla.
Qaphela ezi bhombu ze-carbohydrate:
Ipipi kunye neelekese
Amanqatha angenampilo kunye nokutya okuthosiweyo okunzulu
Xa u-fry ioyile, yenza iipropathi zokukrala- oku kusebenza nakwikukutya okuthosiweyo. Izifundo zibonise ukuba ukutya okunje (okunjengefriji yamaFrentshi, iinkuku zenkukhu kunye nemisinga yentwasahlobo) kunokuzonyusa iimpawu ze-fibromyalgia. Oku kuyasebenza nakukutya okusetyenzisiweyo, okunje ngeedonathi, iintlobo ezininzi zebhiskithi kunye nepitsa.
Enye ingcebiso malunga nokutya kulabo abane-fibromyalgia
Ukutya kweVegat yefibromyalgia: "Go vegan"
Kukho inani lezifundo zophando (kubandakanya uClinton et al, ngo-2015 no-Kaartinen et al, ngo-2001) eziye zibonise ukuba ukutya ukutya okutya imifuno, okunomxholo ophezulu wendalo we-antioxidants, kunokunceda ukunciphisa intlungu ye-fibromyalgia, kunye iimpawu ngenxa ye-osteoarthritis.
Ukutya kwemifuno ayisiyo wonke umntu kwaye kunokuba nzima ukubambelela kuyo, kodwa ukuzama ukufaka umxholo ophezulu wemifuno ekutyeni kuyacetyiswa kakhulu. Oku kuyakukunceda ukunciphisa ukutya kwakho kweekhalori kwaye ngenxa yoko ukuzuza ubunzima ngokungeyomfuneko. Ngenxa yeentlungu ezinxulunyaniswa ne-fibromyalgia, ukuhamba rhoqo kuba nzima kakhulu, kwaye ngenxa yoko kuza iiponti ezingaphezulu. Ukusebenza ngokunyanisekileyo ukunciphisa ubunzima, ukuba unqwenela, kunokubangela izibonelelo ezinkulu zempilo kunye neziphumo ezilungileyo-ezinjengentlungu encinci kubomi bemihla ngemihla, ukuphucula ukulala kunye nokudakumba okuncinci.
Sela amanzi amaninzi aseNorway
ENorway sinokuba namanzi ahamba phambili emhlabeni kwimpompo. Isiluleko esifanelekileyo esivela kwisondlo sokuba uninzi lwezondli luwanika abo banesifo i-fibromyalgia okanye esinye isifo esinganyangekiyo sokusela amanzi amaninzi kwaye sigcine hydrate imini yonke. Kuyinyani ukuba ukungabikho kwe-hydration kungabetha abo bane-fibro eyongezelelweyo ngenxa yokuba amanqanaba amandla ahlala ephantsi kunakwabanye.
Ukuphila ne-fibromyalgia kumalunga nokwenza uhlengahlengiso- njengabo bakungqongileyo kufuneka banikele ingqalelo kuwe (esithetha ngayo kwinqaku esidibanise nelingezantsi). Ukutya okufanelekileyo kunokusebenza kakuhle kwabanye, kodwa kungangasebenzi kwabanye - sonke sahlukile, nokuba sinokuxilongwa ngokufanayo.
Holton okqhubekayo, 2016. Indima yokutya kunyango lwe-fibromyalgia. Ulawulo lobuhlungu. umqulu 6.
IPHEPHA ELANDELAYO: -Iingcebiso ezi-7 zokunyamezela i-Fibromyalgia
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibromyalgidietten2-700px.jpg?media=1648573622 365 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2018-07-25 10:07:122019-06-20 16:17:44I-Fibromyalgia: Ngaba yintoni ukutya okufanelekileyo kunye nokutya kulabo abaneFibromyalgia?
Ngaba ikhona incwadi kwiindlela zokupheka kunye nezidlo kwabo bane-fibromyalgia? Ke umntu unokwenza izitya ezahlukeneyo?
Yile nto kanye ebendiyitya kwiminyaka emibini edlulileyo. Akukho ntlungu kude, kodwa ulahlekelwe ziikhilogrem ezingama-2. Abanye bethu baneentlungu ezingapheliyo ezingaluncedo ngelishwa okanye ngokuzivocavoca. Ngokwam, ihlala iphelela neentsuku ezininzi zentlungu enkulu kunye nokuhlanza ukuba ndithambise kakhulu. Ndikhe ndaye kwii-spas kunye nokuzivocavoca okwavunyelwayo ukuba umthambo unefuthe elibi kum.
Ndifunde ngolangazelelo olukhulu inqaku le-osteoarthritis kunye nendlela yokutya ngokuchasene nesifo. Kulungile kakhulu apha.
Emva koko fumana ngaphezulu kwinqaku malunga nendlela umntu onokutya ngayo i-fibro yokunciphisa usulelo kunye nokudideka !! Kutheni le nto ubisi kunye neemveliso zobisi zingacetyiswa i-osteoarthritis, kodwa ingezizo ii-fibroids? Kuyaziwa ukuba nge-fibro kufuneka sizigece ngokucacileyo ubisi kunye neemveliso zobisi. Kutheni le nto idityaniswa kwaye iphikiswa ulwazi?
Enkosi kakhulu ngokunxibelelana nathi. Inqaku ngoku lihlaziyiwe.
Uphando: Oku kunokuba sisizathu 'senkungu yefibro' Uphando: Iiprotein ezimbini ezinokukunceda ekufumaneni isifo kwi-Fibromyalgia